DF oo laga dalbaday inay sii dayso Mukhtaar Robow | KEYDMEDIA ENGLISH
Taageeriyaasha hogaamiyihii hore ee Al-Shabaab ayaa Baydhabo ka sameeyay kulan looga hadlay xarigiisa, iyadoo sawirkiisa laga dhejiyay derbiga goobta, si loogu muujiyay deraankooda ku aadan maxbuuska Dowladda u xiran.
BAYDHABO, Soomaaliya - Tageerayaasha Mukhtaar Roobow Abu Mansuur oo maanta isagu yimid Baydhabo, ayaa mudaaharaad fadhi ah ka sameeyay xirnaanshihiisa 20-ka bilood uu ku jiro xabsi gaar ah oo NISA ku leedahay magaaladda Muqdisho.
Hogaamiye ku-xigeenkii iyo Afhayeenkii Al-Shabaab, Robow waxaa la xiray Dec 13, 2018 taas oo lagu sifeeyay inay tahay qorshe looga horjoogsanayay inuu u tartamo hoggaanka ugu sareeya ee dowlad-gobolleedka Koonfur Galbeed.
Dowladda iyada ayaa kasoo wadey Roobow sandkii 2018 degaanka Yabaal, oo ku dhaw Xudur halkaasi oo mudo sano ah isaga difaacayay Al-Shabaab kadib markii ay cafis u fidisay, lagana saarey liiska argagaxsiada Mareykanka.
Isla dowladdii xoriyada siisay Robow, ee hotel-ka Xamar dejisay, siisay gaari bullet-proof ah iyo ilaalo gaar ah ayaa hadda ku xirta Muqdisho, kadib markii ay u aragtay inuu ku adkaan karo doorashadii Madaxweynaha Koonfur Galbeed ee dhacday Dec. 2019.
Mukhtaar Roobow ayaa loo qiyaanay sidii Xasan Daahir, waxayna ku jiraan hadda xabsi guri magaaladda Muqdisho, iyagoo aan haysan damaanad in dib loogu celin doono xoriyadooda.
Comments Topics: alshabaab farmaajo roobow xasan daahir